2011 အကယ်ဒမီပွဲတက်ဖက်ရှင်များ (1) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » 2011 အကယ်ဒမီပွဲတက်ဖက်ရှင်များ (1)
2011 အကယ်ဒမီပွဲတက်ဖက်ရှင်များ (1)
Posted by နွယ်ပင် on Dec 31, 2012 in Celebrity, Entertainment, Photography | 35 comments
ဓာတ်ပုံ – FOTOMOJAW
အယ်။ ဒါမျိုးလေးတွေ ကြည့်ချင်နေတာနဲ့တော်ပဲ။ စုစည်းပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
သက်မွန်မြင့်နဲ့ ချစ်သုဝေကို ပဲကြိုက်တယ်။ :hee:
ပွင့်လေး အလှဆုံး….. :hee:
အကြောပြိုင်းပြိုင်းထ အိုဇနာကျနေတဲ့ ဂဒုံးမကြီး မပါလို့
ဟုတ်ပတော်.. ဂီ့သင်ချာလေး တွေ့ဘူးတော့်…
မခိုင်ကိုတွေ့လား နွယ်ဘင် …… မခိုင်က စိတ်ဇိုးပြီး မတက်တာ မနက်ကလည်း တပွဲတက်ရသေးတယ် ……..
ဘယ်ပိုးထည်တိုက်ကမှ သံချပ်ကာအင်းကျီ စပွန်စာမပေးလို့
ပိုးထည်တိုက်ဆိုမှ သံချပ်ကာအကျီပေးမလား … ငတုံးမ မိဂီရဲ့ ……….
ဆံထုံးလေးတွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ မြင်ရတာ ကျက်သရေရှိလိုက်တာ …. ခိခိ
မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ စက်ရုံအကျီ င်္နဲ့ မော်ဒယ်လေးကတော့ နာမည်ကြီးဦးမယ်… အဟိ
မိုးယုစံ နဲ့ ၀တ်မှုံရွှေရည် အကျီ င်္ပုံလေးတွေကို သဘောကျပြီး ချိတ်အဆင်ကိုတော့ ပွင့်နဲ့ ချစ်သုဝေတို့ရဲ့ ကြိုးကြီးချိတ်ဒီဇိုင်းကို သဘောကျတယ် …. ။ ပြောမယ့်သာပြောတာ … အပြင်လူအနေနဲ့ ၊ လတ်လတ်ထအောင်အဲ့ဒါမျိုးဝတ်ကြည့် … ရူးသလား ၊ ကြောင်သလားဆိုတဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့ ကြည့်ခံရမယ် ထင်တယ် …
နန်းစုရတီစိုးကြီးမပါတာ ကောင်းတယ် … ဆံတုံးအဖြူနဲ့ အင်္ကျီကလည်း လှုပ်စိလှုပ်စိ စိတ်ပျက်စရာကြီး ….. တော်တော်များများကတော့ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးတွေဝတ်ကြပါတယ် … အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ ခိုင်သင်းကြည်ကိုတော့ မတွေ့သလိုပဲ …….. ကျော်ကျော်ဗိုလ်မိန်းမ၀တ်ထားတာလည်း နှစ်စဉ်စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို ၀တ်တတ်ပါပေတယ် …
ရီစရာလေး မျှဝေချင်သေးတယ် ….. MRTV –4မှာ မခိုင်ကြီး (ထွန်းအိန္ဒြာဗို) ကိုမမေးခင် … မခိုင်က ခဏနေဦးဆိုပြီး ဘာများလုပ်တယ်မှတ်လဲ …..ညာဘက်မှာ ၀တ်ထားတဲ့လက်စွပ်ကို ဘယ်ဘက်က တီဗွီရိုက်တာဆိုတော့ ညာဘက်ကနေ ဘယ်ဘက်ကိုပြောင်းတာပါလာပါလေရဲ့ … ရီလိုက်ရတာ …. ကြွားချင်တာ ကြွားချင်တာ …. သူကပိုက်ဆံရှိတာပဲ လက်စွပ်ကို နှစ်ဘက်လုံးဝတ်ခဲ့ပေ့ါ …….
ယောက္ခမရယ် … ကြွားနိုင်သူ ၊ ကြွားခွင့်ရှိသူမို့ ကြွားတာ … မုဒိတာပွားလိုက်ပါ … အဟဲ …
တနိုင်ငံလုံးက စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေတဲ့ အချိန် … ချွေးမလည်းဂလိုကြွားချင်တာ….. မီဒီယာမပျော့နဲ့ … လမ်းဘေးက ခွေးတောင် လှည့်ကြည့်မခံရတဲ့ အနေထားမို့ … အဟီးးးးးးးး အားငယ်မိပါအိ
ဂယ်တော့ … အကယ်ဒမီ ပေးပွဲကိုဒီနှစ်လုံးဝ မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး … အဟီး ..
အဲဒါ .. အဲဒါ
စပွန်ဆာပေးတဲ့ အမျိုးတွေအတွက် လုပ်ပေးတာဗျ
ဟွင့် သိလဲ သိဘဲနဲ့
အကယ်ဒမီပွဲနီးပြီဆို အခုလို ကြည့်ရဖို့ မျှော်တတ်လာပြီ။ :hee:
အခြားသော မင်းတမီးလေးဒွေဂိုလဲ အပျင်းပြေကြည့်ရအောင်
ချစ်သုဝေလေး အရမ်းချောဒယ် ..
မိုက်ဒယ် .. ကျိုက်ဒယ် …
အိမ်ရောက်မှ အိုက်ချစ်လေးကို အာဘွားပေးရမယ် ..
ချစ်သုဝေ ဝေါလ်ရှိ တွေ အများကြီး ၀ယ်ထားတယ်လားးးးးးးးးးးးး :harr:
ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ လှကြပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အိချောပိုနဲ့ ခရစ္စတီးနားတော့ မပါဝူး။ ၀တ်ထားတာတွေ ဖော်ထားတာတွေက သောက်ညင်ကတ်ချင်စရာ။ အသဲယားတယ်။ ဟင်းဟင်း
အောက်ဆုံးပုံက မင်းသမီးကို နှူးဘားဂိုဏ်းချုပ် ကိုဂီ့က
ဒီနှစ်လည်း မနှစ်ကလိုပဲ နွယ်ပင်လေးက အကယ်ဒမီပုံတွေ တင်ပေးမယ်လို့ ထင်တယ်။ဒါကြောင့် တီဗွီက မကြည့်ပဲ အေးဆေးပဲ စောင့်နေတာ။ကျေးကျေးပါနွယ်ပင်ရေ။
နန်းသူဇာရဲ့ ကျောက်စိမ်းဆွဲကြိုး က အနဲဆုံး သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းခွဲလောက်တော့ ရှိတယ်
အဲ့ဆွဲကြိုးအပြင်မှာတွေ့ ရင် ရုပ်ဖျက်ပြီး လုသာပြေး
အဲဒီ ဆွဲကြိုး ကြီးက အတုကြီး ထင်တယ်
ဓာတ်ပုံတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ နွယ်ပင်ရေ။
တော်တော်များများ ကတော့ လှကြပါတယ်။
တစ်ချို့ ပုံတွေက ကြည့်ရတာ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်။
အကုန်လှတယ်… Dresses တွေကလဲအရမ်းလှတယ် (အိချောပိုကလွဲလို့)..သူ့ရဲ့ dress က တစ်ခြား Party တွေအတွက်ဆိုရင်မဆိုးဘူး…အကယ်ဒမီပွဲဆိုတော့ဒီ Dress ကတစ်မျိုးကြီးဘဲ..
Oscar 2012 Top 10 dresses တွေတောင်သူ့လောက်မလန်းဘူး…
ချစ်သုဝေနဲ့ ဖြိုးသီရိခေတ်ရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ကြိုက်တယ်။
အမိုက်ဆုံးကတော့…….. ပွင့် :harr:
ချစ်သုဝေနဲ့ သက်မွန်မြင့် ကိုကြိုက်တယ်။ ဒီနှစ်တော်တော်များများ ၀တ်ကြတာ ယဉ်ကြပါတယ်။ အချို့အချို့တွေကလွဲလို့ပေါ့…….. သူတို့ကို ကြည့်ပြီး စိတ်တိုမိတာနဲ့ ကိုယ်တောင် အကုသိုလ်တွေ ရလိုက်သေးတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေအတွက် ကျေးကျေးနော် မနွယ်ပင်…………………
ခြင်ထောင်ဇာ တွေ အကျီချုပ်ဝတ်တဲ့ စတိုင်တွေ ခေတ်စားလာတယ်နော်..
အကယ်ဒမီပေးပွဲ အတွက် စီးကွင့်ဘော်ကျယ် ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ အလုပ်တော်တော် ဖြစ်မယ်။
သနားစရာတွေပါဗျာ ။ ဒီဇိုင်နာတွေ လုပ်သမျှ ပုံမကျ ပန်းမကျ တွေ ဝတ်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘာမှန်းမသိကြတာတွေ ။
Too dull for red carpet. No one decked out. Many accessories make the dress less elegance.
မြန်မာပြည်က ရတနာတွေထွက်တဲ့ တိုင်းပြည်လေ။
ဒါကြောင့် ဒီလို အချိန်မှာမှ ဒီလို ဝတ်ပြီး မကြော်ငြာ ရင် ဘယ်မှာ ကြော်ငြာမလဲ။
တစ်ချို့ နေရာတွေမှာ ကိုယ်က သူများလုပ်တာ လိုက်ခိုးချ လုပ်စရာမလိုဘဲ သူများ က ကိုယ့်လို လုပ်လာအောင် အစွမ်းလဲ ရှိနေရမှာပေါ့။
နောက်ပိုင်း အော်စကာ red carpet မှာပါ မြန်မာ့ရတနာတွေ မဝတ်ဘူး ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။
မြန်မာ့ ရတနာ ကမ္ဘာကို လွှမ်းစေရမည်ပေါ့။ :hee:
တစ်ချို့ ဝတ်ထားတာတွေ လှပါတယ်။
တစ်ခု ဘဲ ရှိတယ်။
အဝတ် ဒီဇိုင်း နဲ့ ရတနာ တွေဝတ်ထားတာ ရှုပ်ရှက်ခတ် မနေဖို့သာပါဘဲ။
မြန်မာအ၀တ်အစားနဲ့.လက်ဝတ်ရတနာ ပရိုမိုးရှင်းတပြိုင်ထဲလုပ်ရာမှာ.. ဘယ်လိုလုပ်သင့်..မလုပ်သင့်ပေါ့…
ဒါမှ.. သူတို့(ဆယ်လီဘရိတ်တီ)တွေပြိုင်ရင်း..ပြိုင်ရင်း.. မြန်မာလက်ဝတ်ရတနာတွေဈေးကြီးနဲ့ရောင်းရမှာ..
နောင်နှစ် အကယ်ဒမီပွဲအတွက် ကြေးမုံဂျီးခေါင်းပေါ်မှာ ကျောက်စိမ်းတတောင်း၊ လက်ထဲမှာ ပတ္တမြားတတင်း၊ ကိုယ်မှာကြေးနီတုံး ဆယ်ပိဿာနဲ့ ဓာတ်ငွေ့ဆယ်ဂါလံပုံး၊ ကျွန်းသစ်တလုံး ကိုယ်နောက်မှာဆင်ပြီး စပွန်ဆာပေးဖို့ ဦးထားပါတယ်။ :harr:
အူးကြောင် အူးကြောင် ဒါဆို နောက်နှစ်အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲက ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ လုပ်မှသင့်တော်မှာပေါ့နော်.
အွန်းးးးးချင်းတိုင်းရင်းသူလေး မသက်မွန်မြင်. ကျက်သရေ ရှိလိုက်တဲ့ မင်းသမီးး
ထရီဇာ. အပြုံးလေး က နှိုင်းစရာရှားလောက်အောင် ဖြူစင်လိုက်တာ….
ပီတိ တွေနေတဲ… မချစ်စနိုးဦးးး..